मनोरन्जन – Page 77 – Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
९ कार्तिक २०७७, आईतवार ०४:४३ English
बलिउड स्टार राजेश खन्नाको रहेनन् ३ श्रावण २०६९, बुधबार १५:१०
निफमा ताईवानको ‘भ्वाईसेस् इन द क्लाउड’ सर्वोत्कृष्ट २ श्रावण २०६९, मंगलवार ०१:५०
काठमाडौं । गत बिहिबारबाट काठमाडौंमा जारी छैटौं नेपाल अर्न्तराष्ट्रिय आदिबासी चलचित्र महोत्सब (निफ) २०१२ आईतबारबाट सकिएको छ । महोत्सबमा सहभागी २० देशका ७९ फिल्म मध्ये ताईवानको बृत्तचित्र 'भ्वाईसेस् इन द क्लाउड' उत्कृष्ट भयो । आरोन निर्देशित ७७ मिनटको बृत्तचित्र 'भ्वाईसेस् इन द..
‘इशारा’ को नयाँ प्रोमो रिलिज २८ असार २०६९, बिहीबार २१:५६
काठमाडौ । सिनेमा ‘इशारा’ ले आफ्नो रिलिज डेट नजिकिदै गर्दा आफ्नो प्रचार प्रसारलाई तीब्र पारेको छ । यसै सिलसिलामा ‘इशारा’ ले आफ्नो नयाँ प्रोमो मेरो सिनेमा मार्फत सार्वजनिक गरेको छ । यो प्रोमो भोलिदेखि सिनेमा हलहरुमा पनि देखाइने जानकारी निर्देशक सविर श्रेष्ठले दिएका हुन् । ‘इशारा’..
दारा सिंहको निधन २८ असार २०६९, बिहीबार १४:१३
काठमाडौ, २८ असार । कुस्ती खेलाडीका रुपमा समेत ख्याती कमाएका बलिवुडका वरिष्ठ कलाकार दारा सिंहको आज बिहान निधन भएको छ । दिमागमा रक्त प्रवाह नभएपछि कोकिला बेन अस्पतालमा एक हप्ताअघि भर्ना गरिएका दारा सिंह भारतीय चर्चित धारावाहिक रामायणमा हनुमानको भूमिका निभाएपछि विशेष चर्चामा आएका..
अर्को विवाहबारे सोचेकी छैन: अभिनेत्री सारंगा श्रेष्ठ २८ असार २०६९, बिहीबार ०४:०१
राजन घिमिरे, काठमाडौं । एक समयकी चर्चित नृत्याङ्गना तथा अभिनेत्री सारंगा श्रेष्ठ अमेरिका छिरेको पनि करिब आठ वर्ष पुग्न लागिसक्यो। यसबीचमा मुस्किलले उनी दुईपटक मात्र नेपाल आएकी छिन्। नेपाली रंगमञ्च र चलचित्र अभिनयको परिवेश अनि वातावरणबाट टाढा रहे तापनि सारंगाले अमेरिकामा रहँदा..
हल्लैहल्लामा मायाज बार २८ असार २०६९, बिहीबार ०३:५५
राजन घिमिरे, काठमाडौं । दिनेश डीसी के गर्न जान्दैनन् ? उनलाई के गर्न आउँदैन ? जवाफ अनुत्तरित नै छ। किनकि कलाकारिता क्षेत्रका हरेक विधा र पक्षसँग विज्ञ छन् उनी अनि त्यत्तिकै निपुण पनि। सिनेमामा अभिनय गर्छन् उनी। गीत पनि गाउन छोड्दैनन् र टेलिभिजन कार्यक्रम सञ्चालन त उनको विशेषता नै हो..
बन्दविरुद्ध कडा कानुनको माग २७ असार २०६९, बुधबार २१:११
काठमाडौं, २७ असार । नेपाल वा त्यसको कुनै भागमा हुने बन्दविरुद्ध कडा कानुन ल्याउन माग गर्दै बुधबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको छ । अधिवक्ता भोजबहादुर केसीले दायर गरेको रिटमा हाल सदन नभएको अवस्थामा अन्तरिम संविधानको धारा ८८ बमोजिम अध्यादेशमार्र्फत त्यस्तो कानुन तुरुन्त..
पुत्र प्रकाशका कारण प्रचण्डको राजनीति धरापमा २६ असार २०६९, मंगलवार १८:२०
काठमाडौं, २६ असार । राष्ट्र नै बनाउंछु भनेर अघिसरेका एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले राष्ट्रलाई कुन हालतमा पुर्याए भन्ने त सबैले देखो–भोगेकै कुरा हो । देश अलपत्र तुल्याएका उनले पछिल्लोपटक पार्टी नै चिरा पारेर अर्को ‘उपलब्धि’हासिल गरेका छन् । आफ्नो परिवारसमेत सम्हाल्न नसक्नेले के देश..
मनाङ-मुस्ताङका पहाड चढ्दै निशा २४ असार २०६९, आईतवार ०४:०९
काठमाडौं । मान्छेका सौख फरकफरक हुन्छन् । त्यही भएर त मानिस पेशा एउटा अंगालेर पनि सौख पूरा गर्न नितान्त बेग्लै बाटोमा हिंड्छ । यस्तै कोशिसमा छिन्, नायिका निशा अधिकारी पनि । उनी अहिले आफ्नो धेरै अगाडिदेखिको सौख पूरा गर्न फिल्मी दुनियाँबाट अलग भएर एक महिने मनाङ यात्रामा निस्किएकी छिन्..
के छ सवीरको ‘रेडवाइन’ भित्र ? २४ असार २०६९, आईतवार ०४:०७
काठमाडौं । मदिरामा पि्रय वस्तु हो, रेडवाइन धेरैका लागि । निर्देशक सवीर श्रेष्ठलाई समेत रेडवाइन खुबै मन पर्दोरहेछ । कतिसम्म पि्रय रहेछ भने उनले आफ्नो पछिल्लो फिल्मको नामै 'रेडवाइन' जुराइदिए । यो फिल्ममा सस्पेन्स थ्रीलर शैलीको लभ स्टोरी हेर्न सकिने छ । जसरी रेडवाइनलाई धेरैले पि्रय..
कतारको चलचित्र–महोत्सवमा एटीएम तगारो २० असार २०६९, बुधबार २१:२८
राजन घिमिरे , काठमाडौ । गलत सोच, गलत नियत, गलत विचार र खराब उद्देश्य बोकेका केही चलचित्रकर्मीहरूका कारण यतिबेला अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपाली चलचित्रको छवि बिग्रन पुगेको छ । सिनेमाको नाममा अश्लीलता प्रस्तुत गर्ने अनि कला नभएर छाला देखाएर पैसा कमाउने गलत सोच बोकेर अश्लील चलचित्र..
राजन घिमिरे , काठमाडौ । कुरा गत साताको हो । प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईलाई भेट्न कलाकर्मीहरूको ठूलै झुण्ड पुगेको थियो । विभिन्न राजनीतिक नेताहरूलाई भेट्दाभेट्दा दिक्क भएका प्रधानमन्त्रीको मुड पनि केही फ्रेस देखिन्थ्यो कलाकर्मीहरूलाई भेट्न..